Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Dutch Georginio Wijnaldum Child Story Story na ihe omuma
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kacha mara aha na aha njirimara; “Gini”. Anyị Georginio Wijnaldum Storymụaka Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha nke Georginio Wijnaldum Biography gụnyere akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya, ndị nne na nna ya, nwunye ya (Virginia Braaf), ibi ndụ, ndụ onwe onye, ​​uru dị oke ọnụ na ọtụtụ eziokwu banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ọrụ ya mana ole na ole na-ele Georginio Wijnaldum's Bio nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị n'ihu adieu, ka amalite.
Georginio Wijnaldum Nwatakiri Akụkọ - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Georginio Gregion Emile Wijnaldum mụrụ na 11th ụbọchị nke ọnwa 1990. A zụlitere ya na Rotterdam, South Holland site na nne ya, Maureen Wijnaldum na nna, Ramon van La Parra.
Mgbe ọ dị afọ isii, nne na nna ya, ndị sitere na agbụrụ Afro-Surinamese, gbara alụkwaghịm n'ihi na nne ya kwagara Amsterdam. Otú ọ dị, Wijnaldum kpebiri ịnọ na Rotterdam wee soro nne nne ya biri, ebe o bi maka oge fọdụrụ n'oge ọ bụ nwata.
Na Wijnaldum dị obere, ọ dịghị mgbe ọ gosipụtara mmasị na football. Ọ naghị eji bọl ma ọ bụ na-ele bọl na TV. Ọchịchọ ya bụ ịghọ egwuregwu mmega ahụ ma ọ bụ egwuregwu.
Atụmatụ a gbanwere mgbe nwa nwanne Wijnaldum gwara ya ka ya na ya bịa Sparta Rotterdam. O kwenyeghi ihe o huru…“Egwuregwu mara mma nke football na niile ya Glory ”.
Ọ chọghị ibi ndụ mgbe ọ hụrụ egwuregwu ntorobịa. Wijnaldum a kpọrọ ya na Sparta Rotterdam agụmakwụkwọ ntorobịa na ịhụnanya ya maka football malitere itolite nwayọ. N'oge na-adịghị anya ọ ghọrọ onye so n'òtù ndị ntorobịa ha.
Georginio Wijnaldum Biography - Na-ewu Onwe Ya Maara Aha Akụkọ:
Mgbe ọ na-egwu Sparta Rotterdam maka oge asaa Wijnaldum kpebiri ịnakwere onyinye Feyenoord ọhụrụ ebe ọ gụchara egwuregwu ntorobịa ya. O kwenyesiri ike na ọ na-egwuri egwu maka Feyenoord ka mma maka mmepe ya dịka onye na-egwu egwuregwu bọọlụ ma kwenye na ọhụụ Feyenoord.
Na Feyenoord, Wijnaldum sonyeere ọgbọ na-enwe ihe ịga nke ọma dị ka Leroy Fer na Luís Pedro. O guzosiri ike dị ka talent.
Na 29 June 2011, onye nchịkwa teknụzụ nke Feyenoord kwupụtara na klọb ahụ erutela mbufe ego maka Wijnaldum kwuru na ọ ruru € 5 nde na PSV.
Ọzọkwa, ọ tolitere n'ọkwá ha ma nye ya nọmba 10 uwe elu. Wijnaldum, nke a ma ama maka edozi isi ya bụ onye ndu dị egwu na pitch.
Na 11 July 2015, Wijnaldum sonyeere ụlọ ọrụ Premier League na Newcastle United na nkwekọrịta afọ ise, maka ego a na-enyefe ego nke £ 14.5 nde, na-eme ka ọ bụrụ ihe ntinye ego kachasị ọnụ nke Mike Ashley.
Mmasị Liverpool bilitere mgbe a na-ewere ya dị ka onye egwuregwu bọọlụ n'egwuregwu megide ha mgbe ọ manyere Martin Škrtel ka ọ nwee ihe mgbaru ọsọ ya yana ịgbanye onwe ya na mmeri 2-0.
Mgbe ha hụrụ na ọ gwụchara oge ahụ dịka onye nchịkọta ihe mgbaru ọsọ ha kachasị elu, ha enweghị ike ịla azụ mgbe ahụ ịdọrọ £ 23 nde na tebụl Newcastle. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Ọnye na-bụ Virginia Braaf? Nwunye Georginio Wijnaldum:
Sweetlọ akwụkwọ sekọndrị obi, ha ka dị. Naanị lee Georginio Wijnaldum anya, onye ya na Virginia Braaf mara mma kemgbe ọ dị afọ iri na abụọ.
Obi abụọ adịghị ya, nwa nwanyị Rotterdam zuru oke adịghị ka cliché-WAG. Ndị enyi abụọ ahụ ka ga-alụ di ka n'oge ederede.
Ọ bụrụ na enwere onye na - abụghị ọlaedo digger, ọ bụ Ms Braaf. Ọ dịghị etu ọnụ banyere ihe ịga nke ọma nke di ya na-egwu bọl.
N'ezie, ole ụmụ nwanyị na-agba bọl ga-ahọrọ ọrụ ụka ụka ụtụtụ Sọnde karịa akwa ha? N'ezie, Virginia Braaf na-adị ndụ maka Onyenwe anyị. O nwetara udo n'okwukwe ya mgbe o jere ogologo ụzọ nke nzọpụta.
Virginia Braaf na-eduga ndụ ya. O nwere udiri ejiji akppo 'Sparkle V'. Ọ bụkwa na-arụ ọrụ na ụfọdụ mmemme ahụ a na-akpọ BodSquad. N'oge gara aga, ya na ndị ọgwụ ọjọọ riri ahụ na-arụkọ ọrụ.
N'okpuru mgbasa ozi mgbasaozi ya, ị gaghị ahụ ọnyà na-egbuke egbuke ma ọ bụ na-ekirikiri eserese nke di ya, ụmụ ha na vidiyo vidiyo nke ọrụ ụka. Wijnaldum n'agbanyeghị na ọ nọ na-arụsi ọrụ ike na-achọta oge maka ụmụ ya.
Nwunye Wijnaldum Virginia mụrụ nwa nwoke aha ya bụ Jacian na August 2017. Ọmụmụ Jacian bịara elekere ole na ole Wijnaldum nyechara aka Jurgen Klopp si akwukwo akwukwo ebe ha no n'ime nkeji nke Njikọ Njikọ na 4-2 merie Hoffenheim.
Onye na-eto eto Dutch Wijnaldum tinyere ozi a na akaụntụ mgbasa ozi ya. O kwuru, sị: “Obi dị m ezigbo ụtọ ịkọrọ gị ozi ọma dị ịtụnanya na ọmarịcha enyi m nwanyị mụrụ nwa anyị nwoke bụ Jacian Emile Wijnaldum na 2:22 nke taa taa 24-08-17. Enwere m afọ ojuju maka enyi m nwanyị na nwa anyị nwoke, ndị ahụike ma nwee obi ụtọ. ”
Georginio Wijnaldum Ndụ Ezinụlọ:
Akụkọ ndị a na-egosi n'oge na-egosi na Wijnaldum sitere na Ghanian. N'oge na-adịbeghị anya, wepụrụ aha Ghana “Boateng” dika aha nna ya ogologo oge gara aga. Ya na aha ezinụlọ ya gara Georginio Boateng na Georginio Wijnaldum. Mgbe nne ya gbara alụkwaghịm, ọ kpọrọ aha nwa agbọghọ ya (Wijnaldum). N'okpuru bụ foto nke nne ya.
Aha 'Boateng' bụ aha nna nna ya nke metụtara onye Dutch na-agba ọsọ ezumike nká nke sitere na Ghana-George Boateng. Nna nna ya nyere m aha nna ya ma mgbe ọ gbara mama m alụkwaghịm, Wijnaldum wepụrụ aha ahụ. Wijnaldum ozugbo agbakwunyere, "Nne m na papa m mbụ bụ Surinamese ka ndị mmadụ wee mee ka o doo anya."
NDỊ BỤ: Wijnaldum nwere ụmụnne nwoke abụọ ndị tọrọ, otu n'ime ha, Giliano Wijnaldum, na-egwu Philadelphia Union ugbu a.
O nwekwara ọkara nwanne, Rajiv van La Parra, bụ onye na-egwu Huddersfield Town ugbu a.
N'ikpeazụ, nwanne ya nwoke nke ọdụdụ, Rogerio Wijnaldum, ndị na-agba ọsọ na-abịanụ. Rogerio nwere nnukwu mmasị banyere nwanne ya nwoke, bụ Georginho.
BỤ: Wijnaldum bụ nwa nwanne nna nwoke nke Real Madrid Royston Drenthe. Drenthe nọrọ oge na Real Madrid, Everton kwadoro ya ma kụọ maka Ịgụ n'oge ọ bụ ọrụ njem.
Georginio Wijnaldum Ndụ Nke Onwe:
Georginho Wijnaldum nwere àgwà ndị a n'àgwà ya.
Ike Wijnaldum: Ọ bụ onye amamihe, onye obi ike, onye nwere mmasị, ezi enyi niile.
Adịghị ike Wijnaldum: O nwere ike ịbụ ekworo, ihe nzuzo na ime ihe ike ma ọ bụrụ na ọ gafere ókè.
Ihe Wijnaldum nwere mmasị: Ọ hụrụ eziokwu n'anya, eziokwu, ezi, enyi ogologo oge ma na-emejọ ndị ya na ibe ya.
Ihe Wijnaldum achọghị: Ndị na-emeghị ihe n'eziokwu, na-ekpughe ihe omimi na ndị na-agafe agafe.
Na nchịkọta, Wijnaldum bụ onye siri ike ma nwee ndị na-ekwenye ekwenye. O kpebisiri ike ma kpebisie ike. Ọ bụ onye ga-eme nchọpụta ruo mgbe ọ chọtara eziokwu ahụ. Wijnaldum bụ nwa mbụ na onye ndu ukwu.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụAnyị Georginho Wijnaldum Nwatakịrị Na-akọ akụkọ ọzọ akụkọ ihe omuma. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!.